Shirka Wadatashiga Iyo Qorshaha Horumarinta Galmudug Oo Dhuusamareeb Lagu Soo Xidhay - Xogside-news Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALI NEWS Shirka Wadatashiga iyo Qorshaha Horumarinta Galmudug oo Dhuusamareeb lagu soo xidhay
Shirka Wadatashiga iyo Qorshaha Horumarinta Galmudug oo Dhuusamareeb lagu soo xidhay
Xogside – Shirka Wadatashiga iyo Qorshaha Horumarinta Dowlad-gobaleedka Galmudug ee afarta sano ee soo socota, ayaa maanta lagu soo gaba gabeeyay Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kadib mudo labo maalmood ah oo wadatashi ay ku yeesheen Galmudug.
Fadhigan oo ay agaasinkeeda laheyd Wasaaradda qorsheynta Galmudug ayay habka fogaan araga kaga qayb galeen Mas’uuliyiin ka tirsan Baanka Aduunka iyo aqoonyahano, kuwaa oo dhamaantood bogaadiyay habka loo marayo diyaarinta qorshaha hormarinta Dowlad Goboleedka Galmudug.
Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Galmudug Cusmaan Macalin Xassan ayaa u sheegay ka qayb galayaasha in muhiimada wadatashigan ay tahay sidii loo heli lahaa qorshe hormarineed oo qeexaya baahiyaha Galmudug iyo sida ay mudnaanta ukala leeyihiin kuwaa oo sahlaya in deeq bixiyaasha lala wadaago baahidaasi.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qorsheynta dowlad gobaleedka Galmudug Cabdullaahi Cumar ayaa ugu dambeyn sheegay in wadatashiyadani sii socon doonaan oo ay si gaar gaar ah ula wadaagi doonaan Wasaaradaha Galmudug, isagoo uga mahad celiyay dhamaan Mas’uuliyiinta kasoo qayb galey shirkan.
Galmudug oo qayb ka ah Dowlada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ayaa ku dadaaleysa sidii loo heli lahaa qorshe dhameystiran oo koobaya baahiyaha Galmudug ka heysta dhamaanba dhinacyada kala duwan ee adeegyada Maamulku bixiyo, iyadoo taasi lagu saleynayo xogta laga uruurinayo Wasaaradda Galmudug.
Previous articleduqa Muqdisho kormeeray xarunta waaxda Caafimaadka ee dowlada hoose Xamar
Next articleRaiisul Wasaare Rooble oo qaabilay Danjiraha Dowladda Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya